नेपाली जनता के को आधारमा स्वाभिमानी हुने ? कालापत्थर देखाएर ? - Suvham News
July 15, 2017 by gsmktm
Prevयही हो हामी नर्कमा हुनुको प्रमाण ।
Nextसाउने सोमबार,पशुपति र इतिहास
विश्लेषण समष्टिमा राम्राेलाग्याे । पङ्तिकारले मनाेवैज्ञानिक, मानवीय र पर्उावरणाीय धर्मलाई कर्मकाण्ड, उपाषनाकाण्ड र ज्ञानकाण्डमा विभक्त गरेर विश्लेषण गरिदिनु भएकाे भए अझै सुन्दर हुनेथियाे । विहारी भिकारीले पनि वस्त्र,माला र टिकाकाे अाधारमा नेपालीलाई सजिलै पट्याउछ भने राजनीति गर्नेले नक्कली बाबा बनाएर जनता भुलाएकाे पनि देखिएकाे छ । विशेष गरेर राजा महाराजाले काली र भैरव देखाएर डरकाे उपधर्म स्थापित गरेकाे पनि छन् । त्यस्ताे अपव्याख्यालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भने नियन्त्रण गर्न पनि सकिँदैन ।